Ulefone S7 Go: Ekwentị ọhụrụ na gam akporo Go (Oreo Edition) | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Nkuzi, Ulefone, Gam akporo nsụgharị
Android Go (Oreo Edition) bụ ụdị nke gam akporo Oreo emere maka ekwentị ndị dị ala. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na ngwaọrụ ha. N'oge gara aga MWC 2018 ụdị a natara ọtụtụ ọkụ na ekwentị ọhụrụ na-eji ya. Ugbu a, Ọzọkwa Ulefone S7 Go na-agbakwunye na ndepụta ahụ.
Ọ bụ ụdị ọhụụ nke akara ngosi China nke ga - adaba n’ahịa. Firmlọ ọrụ ahụ n'onwe ya ekpughelarị na ekwentị ga-eji gam akporo Go (Oreo Edition) dị ka sistemụ arụmọrụ. Yabụ anyị amaralarị na ọ ga-abụ ekwentị nke obere ọkwa.
N'ụzọ dị otú a, ekele ndị gam akporo Go (Oreo Edition) ndị ọrụ ga-enwe ọ experienceụ ahụ dị ezigbo ụtọ. Ebe ọ bụ na nke a bụ nnukwu uru nke a version nke igwe sistemụ nrụọrụ. E wezụga ịbụ nsụgharị nke na-eri obere ego. Ezigbo ma ọ bụrụ na ekwentị dị obere na batrị.
Banyere Ulefone S7 Go ekpughere nkọwa ole na ole ruo ugbu a. Na mgbakwunye na oyiyi ahụ ị hụrụ na mbido. A na-atụ anya inwe 1 GB nke RAM na nchekwa dị n'ime nke 8 GB. Na mgbakwunye na igwefoto okpukpu abụọ 8 + 5 MP. Mgbe igwefoto n'ihu ga-abụ 5 MP. Ezie na ọ ga-Njirimara a 2.500 mAh batrị.
Na mkpokọta anyị nwere ike ịhụ na Ulefone S7 Go ga-abụ ekwentị dị mfe, dị mma maka ndị chọrọ ngwaọrụ nke na-arụ ọrụ nke ọma mana na-enweghị oke frills. Ọ bụ ezie na ha nwere nchegbu banyere imewe ahụ, dị ugbu a, na ọ nwere ezigbo ọrụ na-ekele gam akporo Go (Oreo Edition).
N'oge ahụ ụbọchị nke ngwaọrụ ahụ ga-ada n'ahịa amaghị. Ihe doro anya bụ na ọ gaghị abụ nke ikpeazụ anyị ga - achọta ọnwa ndị a na gam akporo Go (Oreo Edition) dị ka sistemụ arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ulefone » Ulefone S7 Go ga - egosipụta gam akporo Go (Oreo Edition)
LEAGOO S9: Oge izizi ntinye akara ekwentị maka $ 1,99